Gift Card Buying online shopping Booking Air ticket How to register?
AYA mBanking AYA iBanking AYA Counter AYA 123-service
KBZ mBanking KBZ iBanking KBZ Counter KBZPay 123-service KBZ QuickPay
CB mBanking CB iBanking CB Counter CBPay
AGD mBanking AGD iBanking AGD Counter AGD Pay
MAB mBanking MAB iBanking MAB Counter
UAB iBanking UAB Counter
YOMA mBanking YOMA Counter
What is 123? What is PayHere? Load Balance Method Mobile Topup Buying Online Shopping Booking Air Ticket PayHere Use Customer
BNF MMBusTicket Oway
TEAM FAQS About Contact
PayHere ဆိုတာဘာလဲ ?
PayHere ဆိုတာ Digital Convenience Store လေးတခုဖွင့်ထားသလိုပါပဲရှင်။
အွန်လိုင်းကဝယ်ထားတဲ့ လေယာဉ်လက်မှတ် ၊ ကားလက်မှတ်တွေ ၊ ပွဲလက်မှတ်တွေ ၊ အွန်လိုင်းရှော့ပင်းကနေဈေးဝယ်ပြီး ငွေပေးချေတာတွေ ၊
ဖုန်းငွေဖြည့်ကဒ် (Pin and ELoad) နဲ့ဂိမ်းကဒ်တွေ ၊ မီတာဘေလ်နဲ့ CANAL+ ဆောင်တာစတာတွေကို Phone လေးတလုံးရှိနေရုံနဲ့ စတင်အသုံးပြုလို့ရပါတယ် ။
PayHere application ကိုဘယ်ကနေ download ယူလို့ရနိုင်သလဲ ?
PayHere ကို အောက်ပါ Link မှ Download ရယူနိုင်ပါပြီရှင်။
iOS Link >> https://goo.gl/9fmK6a
Google Play Link >> https://goo.gl/BXiG7r
Direct Download Link>>https://goo.gl/p3xjoo
PayHere မှာအကောင့်ဘယ်လိုဖွင့်ရမလဲ ?
PayHere App ကို Download ရယူပြီးပါက App ကိုဖွင့်လိုက်ရင် Register ကနေအကောင့်ဖွင့်ရပါမယ်၊
အချက်အလက်တွေဖြည့်ပေးရပါမယ် အကောင့် Rigister လုပ်ပြီးရင် ဖုန်းနံပါတ်ကို မက်ဆေ့ပို့လာမှာဖြစ်ပါတယ် မက်ဆေ့ပိုလာတဲ့ထဲမှာ Log In ID နဲ့ Password ပို့ပေးပါတယ်
UserID ကို ဖြည့်ပြီး Pair With My Device ကိုနှိပ်ပေးရပါမယ် Password တောင်းပါမယ် မက်ဆေ့ထဲက Password6လုံးကိုရိုက်ထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်
မှတ်ချက် ။ အကောင့်အချက်အလက်များဖြည့်သွင်းရာတွင် !@#$%^&* စသော Special Character များဖြည့်သွင်းလို့မရနိုင်ပါဘူးရှင်။
PayHere မှာငွေဖြည့်ချင်တယ်ဆိုရင် ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ ?
ငွေဖြည့်နည်း (၆) မျိုးရှိပါတယ်ရှင်
(1) Bank Counter များမှတစ်ဆင့် ငွေဖြည့်သွင်းနိုင်ပါသည်။
Account Name ABC-2C2P Co.,Ltd
025070100001671 (UAB )
002545108500675 (YOMA Bank)
-ငွေလွှဲရန်အကြောင်းအရာနေရာတွင် A000 နဲ့စတဲ့ PayHere Partner Code ရေးပြီး ဘဏ်စလစ် သို့မဟုတ် Screen Shot လေးကို Facebook Messenger သို့ပို့ပေးပါရှင်သို့မဟုတ် Viber ဖုန်းနံပါတ် 09-973332099,09-960209949 ကိုပို့ပေးပါရှင်။
-PayHere ဘက်ကိုငွေရောက်ပါက လူကြီးမင်း၏ PayHere Account ထဲကိုငွေဖြည့်ပေးပါ့မယ်ရှင်။
(2) Mobile Banking မှငွေဖြည့်သွင်းနိုင်ပါသည်။
-ငွေလွှဲရန်အကြောင်းအရာနေရာတွင် A000 နဲ့စတဲ့ PayHere Partner Code ရေးပြီး ဘဏ်စလစ် သို့မဟုတ် Screen Shot လေးကိုပို့ပေးပါရှင် Facebook Messenger သို့မဟုတ် Viber ဖုန်းနံပါတ် 09-973332099,09-960209949 ကိုပို့ပေးပါရှင်။
(3) 123 Service ဖြင့်နီးစပ်ရာ
ABC Store ဆိုင် များတွင် လည်းကောင်း ၊
Wai Yan Electronic Stores များတွင် လည်းကောင်း၊
@POST Logo ရှိသော စာတိုက်များတွင် လည်းကောင်း၊
PayHere Partner များထံတွင် လည်းကောင်းထည့်သွင်းနိုင်ပါသည်။
-PayHere App ထဲက Load Balance ကိုနှိပ်ပါ 123 ဆိုတာတွေ့ပါမည် အပေါ်မှာငွေအမောင့်ကိုရိုက်ထည့်ပြီး 123 ကိုနှိပ်လိုက်ပါ Link တစ်ခုထဲကိုရောက်သွားပါမည်။
-Payment Code Ref.1 က code နံပါတ် ငါးလုံးကိုယူပါ အောက်တွင် ငွေပေးချေလို့ရမည့်နေရာများကိုဖော်ပြပေးထားပါသည်။
-ဥပမာ (ABC Stores, Wai Yan Electronics, Sein Gay Har Shoping Center PayHere Logo) ရှိသောဆိုင်များ။
(4) MPU Card ဖြင့်ထည့်သွင်းပေးနိုင်ပါသည်၊ PayHere account ထဲသို့အချိန်မရွေးတိုက်ရိုက်ဖြည့်သွင်းနိုင်ပါတယ်၊
MPU (ATM) နဲ့ငွေဖြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ PayHere App ထဲက Load Balance ကိုနှိပ်ပါ ငွေအမောင့်ရိုက်ထည့်ပြီး MPU ကိုနှိပ်ပါ ပြီးရင် Browxer တစ်ခုထဲကိုရောက်သွားပါမယ် Card Number , Exp Date ,OTP စတာတွေဖြည့်ပြီး Comfirm ကိုနှိပ်ရပါမယ် အဲဒါဆိုရင်တော့ PayHere Account ထဲကိုချက်ချင်းငွေရောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင် Card Number ရိုက်ထည့်လို့ အမှားပြနေပါက eCommerce မလျှောက်ရသေးလို့ဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
i ပုံအစိမ်းလေးကိုထောက်ပြီး eCommerce လျှောက်လို့ရပါတယ်ရှင်။
(5) PayHere+ ဖြင့်ထည့်သွင်းပေးနိုင်ပါသည။်
မိမိရဲ့ PayHere Partner Code A0000**** ကို ဆိုင်ကိုပြောပေးရပါမည် ငွေဘယ်လောက်ဖြည့်မည်ပါပြောပေးရမည်။
(ABC Stores, Wai Yan Electronics, Sein Gay Har Shoping Center PayHere Logo) ရှိသောဆိုင်များတွင်ဖြည့်နိုင်ပါသည်။
(6) AGD Pay ဖြင့်ဖြည့်သွင်းနိုင်ပါသည်။
AGD Pay ဖြင့်ငွေဖြည့်ပြီးပါက Bank Slip ကိုရိုက်ထားသောပုံနှင့်တကွ A0000 နဲ့စသော Partner code ကို PayHere Facebook Page ရဲ့ Messenger (သို့မဟုတ်) PayHere Hotline Viber သို့ပို့ပေးရပါမယ်ရှင်။
မီတာဘေလ်ဆောင်ချင်ရင် ? ၊ မီတာဘေလ်ဆောင်နိုင်သောမြို့ နယ်များ
PayHere Application ထဲမှ ဝန်ဆောင်မှုများကိုနှိပ်ပါ ၊ ထို့နောက် အခွန်အခ ကိုနှိပ်ပါ ၊ မိမိပေးဆောင်လိုသော တိုင်းဒေသကြီး ၊ မြို့နယ် ရွေးပေးပါ ။
Customer Ref No တွင်မီတာစာရွက်တွင်ပါဝင်သော CNP နောက်မှ ဂဏန်း ၁၂ လုံးကို ထည့်ပါ ၊ CNP မပါပါက Barcode အောက်တွင်ပြထားသောဂဏန်း ၁၀ လုံးကိုထည့်ပါ၊ Amount တွင်မီတာဘေလ်စာရွက်တွင်ပါသော ငွေပမာဏကိုထည့်ပါ ။
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ၊ အလုံ ၊ အေးရွာ ၊ ဗဟန်း ၊ ဗိုလ်တစ်ထောင် ၊ ဒဂုံ
ဒဂုံဆိပ်ကမ်း ၊ ဒါးပိန် ၊ အရှေ့ဒဂုံ ၊ လှိုင် ၊ လှိုင်သာယာ ၊ လှည်းကူး ၊ မှော်ဘီ ၊ ထန်းတစ်ပင်
ထောက်ကြံ့ ၊ အင်းတိုင် ၊ အင်းစိင်္န ၊ ကမာရွတ် ၊ ကြည့်မြင်တိုင် ၊ လမ်းမတော် ၊ လသာ
မရမ်းကုန်း ၊ မင်္ဂလာတောင်ညွန့် ၊ မင်္ဂလာဒုံ ၊ မြောင်းတကာ ၊ မြောက်ဥက္ကလာပ ၊ မြောက်ဒဂုံ ၊ ဥက္ကံ
ပုဇွန်တောင် ၊ ပန်းပဲတန်း ၊ ဖောင်ကြီး ၊ စမ်းချောင်း ၊ ဆိပ်ကမ်း ၊ ရွှေပေါက်ကံ ၊ ရွှေပြည်သာ ၊ ရွှေလင်ပန်း ၊ တောင်ဥက္ကလာ
တိုက်ကြီး ၊ တာမွေ ၊ သာကေတ ၊ သင်္ဃန်းကျွန်း ၊ ရန်ကင်း ၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး ၊ ပဲခူး ၊ တောင်ငူ
PayHere ကိုဆက်သွယ်ချင်ရင် ?
ဖုန်းနံပါတ်- ‎‎‎‎‎‎09797532333,‎‎‎09797532444 ကိုအချိန်မရွေးဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်ရှင်။
Please feel free to contact us anytime anywhere.
Hotline Number :+09797532333 & +09797532444
Office Days : Monday to Friday, 8 AM to5PM
Address : No. 3, Zizawar Street, 8 Quarter, Parami
(Chawdwingone), Yankin Township, 11201 Yangon
No. 3, Zizawar Street, 8 Quarter, Parami(Chawdwingone), Yankin Township, 11201 Yangon
PayHere for your Business!
PayHere isadigital convenience store which provides Providing eCommerce Payment, Teleco Topup Cards (MPT, Telenor, Ooredoo ,Mytel and MEC), Others Topup (easyPoints, Google Play, iTunes, ..), Electricity Bills and Canal+ monthly bills payment